Horseed oo Jooga laga tuuray iyo Hilac oo goolal looga xishood siiyay
Horseed 2-4 Dixon
Waxaa magaalada Toronto si xiiso leh uga socada koob loogu magac daray Istar Cup.
Tartankan oo soo gaaray is aragiisa labaad "Ritorno" ayaa waxaa ciyaarta kowaad wada ciyaaray kooxda Horseed iyo Dixon oo iyagu min 3 dhibcood ka soo aruursaday wareega kowaad "Andata".
Ciyaartan oo ku bilaabantay jawi qurxoon, ayaa labada kooxoodba si weyn isu weeraray. Wixii haddaba koox gool laga dhaliya ugu dambeyntii 4-2 ayaa Horseed dhulka lagu dhigay, sidaan Dixon ay guusha la hooyatay.
Kooxda Horseed ayaa aad uga carootay Rigoore "Penalty" ay heleen kadib markii kabtanka kooxda Xassan Xarbi oo goolka dhalin rabay uu Cumar Bongo uu dhulka la galay. Garsoorihii ciyaarta ayaa isagu ku gacan seeray in taasi ay tahay Rigoore.
Xiddigaha 5-3 Hilac
Ciyaartii labaad ayaa waxaa foodda is daray kooxd xiddigaha oo wareegii 1aad ku soo aruursatay 7 dhibcood iyo Hilac oo iyadu 4 dhibcood wadatay.
15kii daqiiqo ee ugu horeeyay ayaa labadan kooxood wax gool ah kala dhalin waayey.
Tababaraha kooxda Xiddigaha Xaaji Axmadeey B ayaa kooxdiisa ku canaantay iney gool dhaliyaan.
Ciyaartooyda Xiddigaha oo aan canaantaasi uga daran ayaa markiiba hal gool dhaliyay
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa lagu kala nastay 1-0 oo ay Xiddigaha ku hogamineyso.
Nasashada kadib ayaa kooxda Xiddigaha ay dar dar xoog leh garoonka la soo galeen iyagoo halkaasi 2 gool oo daran doori ah halaasi ka dhaliyay.
Markii ay ciyaartu mareysay 3-0, ayaa ciyaartooyda Xiddigaha ay bilabeen iney kubadda goolkooda hortiisa ay isugu baas baa'saan. Sheekada iska bashaalka ah ayaa waxaa ka faa'iideystay weerarka Hilac iyagoo kubadda goolka xiddigaha hortiisa 3 jeer oo isku xigta ku dafay seddax goolkana ka dhaliyay.
Markii ay ciyaartu noqotay 3-3 ayay ciyaartooyda Xiddigah hurdada ka tooseen iyagoo halkaasi 2 gool kale oo Hilac ka xishood siiyay halkaasi ka dhaliyay.
Ciyaatani ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay 5-3 ay guusha ku raacday Xiddigaha. Ciyaartooyda iyo taageereyaasha Hilac ayaa iyagoo madax hoos u dhigaay garoonaka ka qul qulay
Xiddigaha 4 2 1 0 24 16 10
Dixon 4 2 0 2 12 11 6
Hilac 4 1 1 2 12 14 4
Horseed 4 1 0 3 16 21 3
Is araga 1aad (Andata)
Oct.17,2012 7:30 pm Xiddigaha 5-5 Hilac
8:30 pm Dixon 4-3 Horseed
Oct.24,2012 7:30 pm Xiddigaha 10-7 Horseed
8:30 pm Dixon 1-2 Hilac
Oct.31,2012 7:30 pm Horseed 3-2 Hilac
8:30 pm Dixon 3-4 Xiddigaha
Is araga 2aad (Ritorno)
Nov.07,2012 7:30 pm Dixon 4-2 Horseed
8:30 pm Hilac 3-5 Xiddigaha
Nov.14,2012 7:30 pm Hilac V Dixon
8:30 pm Xiddigaha V Horseed
Nov.21,2012 7:30 pm Dixon V Xiddigaha
8:30 pm Hilac V Horseed